Gado Mid Qaado Labo “Buy one take two”
Cumrigaa oo raaga geel oo dhalayana waa ku tusaa, waxaa la yiri; waxaa ku maahmaaha reer Banaadir. Bulshada soomaaliyeed qaar ka mid ah waa liidaan qofkii aan arag geel dhalaya. Haddiise la waydiiyo Qubo sidee loo qalaa, hilibkeeda oo karayana ma aragtay, si sahlan wuxuu u oran; maya, ceeb iyo liidashana uma arko!.
Waagii Kacaanku ku dhawaaqay “Mashruucii Karaash Boragraam” bilowgii 70-ta meeyadii ayaa baridda habka beeraha loo tacbo awgeed koox dhallinyaro oo dhoobleey (dhulka beeraha) hore aan cag u dhigin lagu xereeyay beer ku taal Jannaale. Maalmo kolkay joogeen ayaa galabtii dambe rag ka mid ah raggii la tababarayay arkeen “Jeer” wabiga jiinkiisa mayracanaysa (daaqaysa). “Hooga, waa dibi cayilay!, war ma aha ee waa lo’gisi, maan hilbo kala harro?!” ayay hal mar wada yiraahdeen. Waxba ma aysan hubsan, faasas ayay la yaaceen. Markay u soo dhawaadeen ayay inta wayraxday oo “fuuf” tiri; soo aadday dhankooda oo qaar midig u daadisay qaarra bidix u daadisay. Intaysan isa soo rogin ayaa askari meesha ka dhawaa xabbad afka u galiyay. Illayn, aqoon darro waa shil joogto ah. Galabtaa dhaawac fara badan ayaa goobtii laga daldalay.
Haddaba, Maahmaahdu waxay tilmaamaysaa dagaan geel dhaqashada aan laga aqoon, halka sheekadu tilmaan gaar ah u tahay; Jeer nin aan aqoon in uu faas hilib kaga doono.
Maahmaahda, maxaa i soo xusuusiyay?.
Runtii, maahmaahdaa waxaan soo xusuustay kolkaan ka fakaray meesha soomaali maanta marayso iyo gobanimadii barisamaadkii soo martay. Jirxun xabashi ah oo suuqii Bakaaro dhex taagan, waddadii “Cafe Nazionale” oo Taangi ku cararayo iyo guryihii Xamar oo albaabkiiba 10 qataar lagu rogo baqdin awgeed, wax loo adkaysan karo ama laga aamusi karo, runtii ma aha. Dastuurkii Jammhuuriyadda Soomaaliya oo dhaqan galay, 21-juun-1960-ii Qaybtiisa: 1aad Mabaadi’ Guud, Qodobka 1aad wuxuu u qorraa sidatan: (la Somalia e uno stato indipendente e pienemente sovrano. Essa e Repubblica democratica reppresentativo. Il popolo e una unita’ indivisible).Soomaalia waa dal xor ah oo si buuxda u madaxbannaan (siyaado leh). Waa Jamhuuriyad dimoqaraadi ah oo la isa soo doorto. Shacbigeedu waa mid aan qaybsamin. Qodobka: 2aad wuxuu u qorraa sidatan: (La sovranita’ appartiene del popolo che la esercita nell forme determinate dalla Costituzione e delle leggi. Nessuna parte del popolo e nessuna individuo pou reclamare per se la sovranita o arrogarsene l’esercizio) Madaxbannaanida (Siyadada) waxaa leh shacabka, wuxuuna uga dhaqmaa qaab ku xadidan Dastuurka iyo Qawaaniinta. Qayb shacabka ka mid ah iyo qof toona ma sheegan karaan madaxbannaani (siyaado) kumana tagrifali karaan gudashadeeda. Ereyada ah: Sovereignty iyo Occupation qeexid ahaan waa: 1-Sovereignty: is the exclusive right to have complete control over an area of governance, people, or oneself. A sovereign is the supreme lawmaking authority, subject to no other. Madaxbannaani (Siyaadah) waa xaq gaar oo aad u lee dahay ilaalin (control) buuxda oo dhul maamulki, dad ama nafsad ahaan. Madaxbannaani waa awoodda sare oo sharci dhajinta oo aadan cid kale u hoos joogin. 2-Occupation: Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. Qabsasho: Dal waxaa loo aqoonsa karaa mid la qabsaday markuu dhab ahaan hoos tago awoodda ciidan cadow ah.
Haddaba, xaaladdu ma aha cumrigaygi oo inta raagay (Alle mahaddiye) geel dhalaya i tusay, ee waa Nuur-cadde, oo goortuu dammaaday –kuma masayne- sida, “Maxamed Dheere” kala sooci waayay Madaxbannaani (Sovereignty) iyo Qabsasho (Occupation). Marar badan Nuur-cadde, wuxuu soo jeediyay; “xoogagga uu macaaradka ku sheego -balse gobanimadoonka ah- wadahadal in uu la galayo iyaga oo aan kala sooc lahayn”. Su’aasha durba soo boodday, waa horta, Nuur-cadde, ma hayaa awood uu tallaabada caynkaa oo kale ah ku qaadi karo?.
Nabadoon “Axamed Diiriye” iyo saaxiibadi oo intaan xabashi dallka soo galin meeshay doonaan mari jiray, dhaqdhaqaaqa loo soo tuugay, mid la mid ah miyaa 10Malyan oo soomaali ah, Melles Zanawi looga soo tuugi?!. Duqu, ma ka indho qarsanayaa; wax uusan hayn in uusan bixin karin. Dhanka kale ragga iyo haweenka ku xaraysan bakhaarkii Gallayda iyo Masagada (ADC-da Baydhabo) waa hal booli ah, loomana fadhiyo nirig xalaal ah in ay dhasho, ee muxuu fali?!. Waxa uu sheegato (xukuumad) jirta ma aha, sidaa darteed, heshiiskii (agreement) uu soo galo Barlammaan ku-sheega gacan taagiisa doqon nimo ansax ma ka noqon karaan?!.Maya.
Dalalka, reer galbeedka (Yurub iyo Ameerika) ee aan ku soo qaxnay waxaan ka barannay qaab badeecadaha raaga loo socodsiiyo. Tusaale ahaan: saliidda madaxa la marsado, haddii ay kaa socon waydo, lacag kaash ah oo badeeco cusub aad ku soo iibsatana u baahato, qiimaha dhalo saliid ah oo aad siin jirtay 1000sh.so ayaad markan Labadii dhalo siinaysaa 1000sh.so ah. Laba dhalo oo saliida ah ayaad ku dhajinaysaa waraaq yar oo ay ku qoran tahay; Gado Mid Qaado Labo (Buy One Take Two), oo micnaheedu yaha halkaad 1000sh. ku qaadan lahayd 1dhalo oo sliid ah, hadda, isla 1000sh. ku qaado 2dhalo oo saliid ah.
Haatan, siyaasadda Nuur-cadde oo oronaysa; “xoogagga mucaaradka waan la hadlayaa”, runtii, waxay la mid tahay: La Hadal Mid ha kuu Jawaabto Labo. Micnaheeduna yahay “Xoogagga mucaaradku Nuur-cadde ha la hadlaan, jawaabnna ha ka sugaan Malles Zanawi iyo Nuur-caddena”, waliba go’aanka ugu dambeeya Malles ayaa leh..
“Gado Mid Qaado Labo” ganacsi markay joogto Macaamiisha (customer-ka) waa u dan. Siyaasadse markay joogto; muwaadinka waa ku ihaano iyo khasaare!. Sidaa darteed, soomaali marra kama suurowdo caqliga jaadkaa ah in ay u qoordhiibato.
Ninka subixii; Gabre ku soo kallaho, habaynkiina Gabre dheelmo, maxaa gacantiisa ku jira?!, goormuuse waqti uu ku fakaro helaa?!. Xamar oo caasimaddii Soomaaliya ah soo Nuur-cadde subax walba ma hor maro Taangi xabashi lee dahay iyo askari xabashi ah oo qori waddada bartamaheeda la taagan. Xaruntii “Taliska Booliska Soomaaliyeed” oo Nuur-cadde madaxda ku shaqaysa ka mid ahaa, soo ma aha Gabre isaga oo dhinac fadhiya madhasha uu baabuurta deeqda ah kagala wareegay (AMISON)?!. Waa yaabe, dadkan sidee wax isu tuseen, ma annagaa waalan, mise Cadan baa laga heesayaa?.
Waxaan maqli jiray hebel ama heblaayo “wadaaddo iyo Fiqi Buraale” ayaa ku furfurtay, markii dabqaad loo qaliyayna waa ka dhex hadleen oo waxay yiraahdeen: Darmaantan annagaa haysannee, xaqayaqii ha nalaka siiyo, haddii kale labo ayaan u kala gonaynaa?!.
Dabadeed, inta dabqaad loo galiyay ayaa la muddeeyay oo, la yiri: Fiqi Buraale iyo Faarax Aadan laba Ciise Dheeroow; Halalow iyo Hala Booqad aada”. Haddaba, ma waan laga fiicnayn oday aqoon leh oo dal iyo dad soo dhaqay in laga dhex hadllo oo hadda, “fiqi Buraale” laga shido isaga oo waayeel ah?!.